တူနီးရှား - Basma Khalfaoui: "ဒီအတ္တတွင်းကိုကျော်လွှားရန်အတွက်အဓိကအတားအဆီးများမှာ" - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "တူနီးရှား - Basma Khalfaoui:" ဒီအတ္တတွင်း "ကိုကျော်လွှားရန်အတွက်အဓိကအတားအဆီးများမှာ - JeuneAfrique.com
တူနီးရှား - Basma Khalfaoui: "ဒီအတ္တတွင်းကိုကျော်လွှားရန်အတွက်အဓိကအတားအဆီးများမှာ" - JeuneAfrique.com
မုဆိုးမခေါင်းဆောင် Chokri Belaid Basma Khalfaoui ရှေ့နေ 2013 1 အောက်တိုဘာလလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်ကျူးနစ်၏ခရိုင်အတွင်းရှိလက်ရှိဖြစ်ပါသည်,6အတွက်လုပ်ကြံခံခဲ့ရထားခဲ့တယ်။ ဒါဟာ Jeune Afrique မှသူ၏နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များကိုရည်ညွှန်းသည်, ဒါပေမယ့်လည်းတော်လှန်ရေးများ၏ချို့ယွင်းချက်နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း၏အသေခံခြင်းသို့စုံစမ်းစစ်ဆေး relaunched ။
တူနီးရှားအကူးအပြောင်း၏အစအဦးအပါအဝင်နိုင်ငံရေး, အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်မှတ်သားခဲ့သည် Chokri Belaid ၏လုပ်ကြံခံရ။ အဆုံးစွန်သောများ၏မုဆိုးမ, Basma Khalfaouiအမြဲသစ်တစ်ခုညွန့်ပေါင်းပူးပေါင်းရှေ့တော်၌မိမိပါတီများ၏စံဆောင်လုလင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ယခုအခါအမှန်တရားနှင့်နိုင်ငံရေးကတိကဝတ်ရှာကြံအကြားသူမ၏အချိန်ကိုပိုင်းခြား။
ရှေ့နေနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူသူမကတသမတ်တည်းသူမ၏နှောင်းပိုင်းကယောက်ျားကိုကိုယ်လင်၏နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်သိရသည်။ ဦးခေါင်းအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေလူမှုဒီမိုကရက်တစ်သမဂ္ဂ (SDU) ၏တံဆိပ်အောက်မှာကျူးနစ် 1 ၏ခရိုင်ထဲမှာ။
Jeune Afrique: သင်၏ခင်ပွန်း၏လုပ်ကြံခံရပြီးကတည်းက, သင်ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံရေးကနေယာယီကွာနင်းမှီ, Watad (စုစည်းပါတီဒီမိုကရေစီမျိုးချစ်), သူအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရာ၏ပါတီအတွက်မဲဆွယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဤရွေးချယ်မှု?
Basma Khalfaoui: Chokri ၏သေသောနောက်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်ကသူ့လူသတ်မှု၏အခွအေနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားသိရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအရပ်ဘက်ပါတီတွေ Watad ကိစ္စမဟုတ်ခဲ့သည့်ကာကွယ်ရေးကော်မတီအတွက်ဖြည့်ဆည်းလိုကြသည်။ ဒါနဲ့မိသားစုကာကွယ်ရေးကော်မတီအတွက်ဆက်လက် 2015 ၌ကျန်ကြွင်း။ ငါသည်ဤရှာပုံတော်နှင့်ငါ့သမီးကျိန် ဆို. ပူဇော်ပါ၏။ ကျွန်မအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးကို gangrenous ဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုကာလကိုပြန်ခြေလှမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ UDS ပူးပေါင်းရှေ့တော်၌ထိုလှုပ်ရှားမှုကို "ရှေ့ဆက်တူနီးရှား," ။ သငျသညျအဆင်ပြေဤမဟာမိတ်ဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေထက်ကျော်လွန်ကြာရှည်နိုင်ကြောင်းထင်ပါသလား ?
disgruntled ပါတီမျိုးချစ်များနှင့်ဒီမိုကရေစီမူကြမ်း Chokri ခဲ့မတိုင်မီတူနီးရှားတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 များတွင်အရာရှိများကုလားထိုင်မှသူတို့ရဲ့စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုငါ့ကိုမေးတယ်။ ငါကနိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်မှာငါ့နေရာအရပ်ယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနထောင်လွှားဘေးဖယ်ချပြီးတစ်ဘုံအစီအစဉ်ကိုလှည့်ပတ်အတော်ကြာအုပ်စုများအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဖို့ဖြစ်တယ်။
ငါညွှန့်ပေါင်း၏ installation အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထင်
တူနီးရှားအတွက်ပထမဦးစွာရှေ့ဆက်အတူတကွအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်လူသိများဆောင်တတ်၏ထားတဲ့ထို့နောက်ဒီမိုကရေစီနှင့်လူမှုရေးပြည်ထောင်စု, al-Massar, Joumhouri, ဆိုရှယ်လစ်ဒီမိုကရက်များ၏လှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ် လူထုအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်း Qadiroune ၏အုပ်စုဖွဲ့။ ငါညွှန့်ပေါင်း၏ installation အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထင်ပါတယ်။ အဆိုပါအတ္တတွင်းကိုကျော်လွှားရန်အတွက်အဓိကအတားအဆီးဖြစ်ကြသည်။
သင်ကမဲဆန္ဒနယ်ကျူးနစ် 1 အတွက်ဥပဒေပြုရွေးကောက်ပွဲများကိုတင်ပြရန်သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပထမတစ်ကိုယ်တော်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ဤ option ကို 2014, အဘယ်ကြောင့်ယခုသွားပါဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သလဲ
ငါအဆင်သင့်ဖြစ်၏။ ကြှနျတေျာ့အမွငျတှငျ, ယခင်ပါလီမန်မူဝါဒများနှင့်လူမျိုး၏မျှော်လင့်ချက်များမှတက်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှေ့နေအဖြစ်ငါညီလာခံတွင်ဥပဒေပြဌာန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတဆင့်တစ်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးမူဝါဒမဟာဗျူဟာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ဖို့ငါ့အသက်ကို၏ကျန်သုံးဖြုန်းချင်ကြပါဘူး။
အစိုးရက (လတ်ပုံရိပ်ကို) ၏နှုတ်ထွက်စာကိုတောင်းဆိုအောက်တိုဘာလ 23 2013 အပေါ်ကျူးနစ်ထဲမှာတစ်ဦးကသရုပ်ပြ။ © AP Photo / Hassene Dridi
ကျနော်တို့ကအရမ်းဝေးတော်လှန်ရေးရဲ့ပန်းတိုင်များအနေဖြင့်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေး, ဒါပေမယ့်လည်းဂုဏ်သိက္ခာ, လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးခဲ့ကြသည်, တစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိကြ၏။ 2011 ကတည်းကအာဏာရပါတီများအသစ်တစ်ခုကိုချိန်ခွင်လျှာကိုဖန်တီးရန်သေချာလုပ်ကြပြီမဟုတ်။ ဒါကစီးပွားရေးမူဝါဒဟာသူတို့ရဲ့မရှိခြင်းဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အတောင်းဆိုနေတာအဖြစ်လိုအပ်သောခြေလှမ်းများကတဆင့်သွားစရာမလိုဘဲသူ့ရဲ့သင်္ကေတများအမြတ်ထုတ်သည်အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်ပြည်တွင်းအငြင်းပွားမှုများ, ဒါမှမဟုတ်ယခင်စစ်အစိုးရနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတစျမြိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်အစားအာရုံစူးစိုက်။
စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မည်မဟုတ်ပါဆိုတဲ့အချက်ကိုအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်သည်။ ခြင်း ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်လွတ်လပ်သောအမြင့်အာဏာပိုင် (Isie) လည်းကောင်းတစ်ဦးသင်ယူမှုသည်။ သို့သော်များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း, တစ်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးအဖြစ်.
လွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်တူနီးရှားနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု၏သေးငယ်တဲ့ကာလကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော်အားလုံးလျင်မြန်စွာဖိနှိပ်ပိတ်ပင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ထို့နောက်တပါတီအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ရှစ်နှစ်ပါတီဘဝတည်ဆောက်ရန်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပါတယ်။ သင်းဖွဲ့ရဖြစ်ကြသည်။
Chokri Belaid, 2010 အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်မျိုးချစ်၏ပါတီ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်။ © Hassene Dridi / AP / SIPA
Chokri Belaid ညဉ့်လုပ်ကြံခံရသို့သွေးတွေစီးထွက်လာတရားစီရင်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကအရမ်းလေးနက်သည်နှင့်သမ္မာတရားကိုထွက်လာ
သင်သည်သင်၏ခင်ပွန်း၏လူသတ်မှု, Chokri Belaid ပတ်သက်. အမှန်တရားဘက်မှာစစ်တိုက်သဖြင့်, နှောင့်နှေးရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဘယ်မှာရှိသနည်း
အကြမ်းအားဖြင့်ပြောကိစ္စတွင်ခွဲထွက်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းများကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ဆလာမီအမှန်တရားထွက်ကြွလာသည်ဟုအလွန်လေးနက်နှင့်ညဉ့်သည်။ နှောင့်နှေးသင့်လျော်သောပုံရသည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးတရားသူကြီး, ဘာရှား Akremi, အခြားသူများကဲ့သို့ Ennahda အားဖြင့်ခြယ်လှယ်နေကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကာကွယ်ရေးကော်မတီကို တရားစီရင်ရေးအလုပ်, ဒါပေမယ့်တစ်စုံစမ်းအလုပ်သာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Ennahda အတွင်းအပြိုင်လုံခြုံရေးယန္တရား၏တည်ရှိမှုရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။ ဤပြဿနာကိုသိမ်းယူရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နိုင်ငံရေးအာဏာဟာငြင်းပယ်ရှိပါသည်။
ချဒ်: အမျိုးသမီးသေခံဗုံးခွဲသမားအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိခြောက်လကလူတဦးသေဆုံး - JeuneAfrique.com